Netanyahu oo Imaaraadka ceebeeyey saacado uun kaddib markii ay kala saxiixdeen heshiis rasmi ah | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Netanyahu oo Imaaraadka ceebeeyey saacado uun kaddib markii ay kala saxiixdeen heshiis...
Netanyahu oo Imaaraadka ceebeeyey saacado uun kaddib markii ay kala saxiixdeen heshiis rasmi ah
(Tel Aviv) 14 Agoosto 2020 – Israel ayaa ku celisey inay weli ka go’an tahay inay qaadato dhul badan oo ka tirsan Daanta Galbeed, sida uu sheegay RW Benjamin Netanyahu.
Warkan ayaa imanaya saacado uun kaddib markii ay Imaaraadku sheegeen inay xiriir rasmi ah oo diblomaasiyadeed la yeelanayaan Israel, iyagoo weliba warka ku quruxsaday inaysan Yuhuuddu goosan doonin doonin dhulka Daanta Galbeed oo ay Tel Aviv ogolaatay inay joojiso.
Yeelkeede, Netanyahu oo isla shalay dadwaynaha TV-ga kala hadlay ayaa warkaa beeniyey.
“Waxba iskama bedelayaan qorshaha madax bannaanida Yuhuudaa iyo Saamirah, oo aannu si buuxda ula kaashanayno Maraykanka,” ayuu ballan qaaday Netanyahu, oo dhulka Daanta Galbeed siinaya magacyo Baybalka ku qoran.
Arrintan ayaa muujinaysa laba-wejiilayn uu midkood sameeyey Imaaraadka iyo Israel, iyadoo eedda teeda badan la saarayo kuwa hore oo la fahamsan yahay inay kas dadka u khaldayaan, maadaama ay siyaasadda Yuhuudu weligeedba caddayd.
Previous articleIsraa’iil & dadka dhexe ee Xisbiga Dimoqraadiga oo ku DADAALAYEY inaysan soo laaban & Ilhaan oo ka qoto dheer sida la moodayo (Qaybtii 2-aad)
Next article”Madaxtooyadu waa ka shallaaysan tahay tuuristii Khayrre!” – Maamulka sare ee Baarlamanka & Madaxtooyada oo is mari la’